မေးလျှင်ဖြေမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ) ၏ အဖြေများ - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
မေးလျှင်ဖြေမည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အမေးအဖြေကဏ္ဍ) ၏ အဖြေများ - အပိုင်း (၁)
Posted by Myanmar Network on August 27, 2015 at 12:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခင်အပတ်တွင် စတင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွင် မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းများထဲမှ "Either...or/Neither...nor" ၊ "Just" နှင့် "article" များကို အသုံးပြုပုံရှင်းလင်းဖြေကြားချက်များကို အောက်မှာ ဖြေကြားပေးလိုက်ပါပြီ။
မကြာသေးခင်လေးကမှ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် just ကို သုံးပါတယ်။ ဗြိတိသျှတွေက Just ကို present perfect ဖြစ်တဲ့ has/ have တို့နဲ့ တွဲပြီး ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
I have just arrived. (ငါအခုဘဲ ရောက်တာ။)
I have just sold my car. (တစ်လောကဘဲ ကားရောင်းပစ်လိုက်ပြီ။)
I have just finished going through Chapter 6. (အဲ့ဒီအပိုင်း အခုလေးဘဲ ဖတ်ပြီးတာ။)
အမေရိကန်တွေကတော့ Just ကို past tense နဲ့ တွဲသုံးကြပါတယ်။
I have just arrive. အစား I just arrived. လို့ ပြောကြတယ်။
He just died. (သူအခုလေးတင် ဆုံးသွားတယ်။)
I just broke the wine glass. ( ဖန်ခွက်ကွဲသွားပြီ။)
တစ်ချို့ဗြိတိသျှတွေက just ကို past tense နဲ့ တွဲသုံးတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗြိတိန်မှာတော့ ဒီအသုံးကို မှားတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
စကားပြောမှာ just ကို now နဲ့တွဲပြီး “မကြာသေးခင်ကဘဲ” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ just nowကို ပြောကြပါတယ်။
I telephoned him just now. He will be here soon.
I told youalie just now.
ဒါပေမဲ့ formal writing အရေးအသားမှာ just now ကို မသုံးရဘူးနော်။
Article ဆိုတာ a, an, the စတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောတာပါ။ လူတစ်ယောက်၊ အရာဝတ္ထုတစ်ခုအကြောင်းကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပြောရင်aသို့မဟုတ် an ကို ထည့်ပြောရတယ်။aနှင့် an ကို indefinite article လို့ ခေါ်တယ်။ a, an တို့နဲ့ သုံးတဲ့ noun တွေဟာ singular ဖြစ်ရပါတယ်။ ပြောပြီးသားလူ၊ အရာဝတ္ထုတွေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ညွှန်းပြီး ပြောရင်တော့ the ကို သုံးရပါတယ်။
She picked upabook. The book was lying on the table.
After weeks of looking we finally boughtahouse. The house was inasmall village.
တစ်ယောက်ယောက်၊ တစ်ခုခုကို သရုပ်ဖေါ်ပြရာမှာလည်း a, an တို့ကို (adjective + noun) (noun + quantifier) တို့နှင့် တွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။
His brother wasaclever child.
I choseapicture that reminded me of my village.
လုတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်ကို ဖေါ်ပြရာမှာလည်း a, an ကို ထည့်ပြောရပါတယ်။ ဥပမာ - He isadoctor. လို့ ပြောရတယ်။ He is doctor. လို့ မပြောရဘူးနော်။
နောက်ပြီး vowel အသံနှင့် စတဲ့ စကားလုံးတွေ့ရှေ့မှာ an ကို ထည့်ရပါတယ်။ consonant အသံနှင့်စတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အရှေ့မှာတော့aကို ထည့်ရပါတယ်။ ဥပမာ -ahouse, an hour
A နှင့် an ကို တစ်ခု၊ တစ်ယောက် စတဲ့ အရေအတွက်ကို ဖေါ်ပြရာမှာလည်း သုံးသေးတယ်နော်။
နောက်ထပ် article တစ်ခုကတော့ the ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့သလိုဘဲ၊ လူတစ်ဦး၊ အရာတစ်ခု၊ အကြောင်းအရာတစ်ခု စသည်တို့ကို အရင်ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး နောက်တဖန်ပြန်လည် ဖေါ်ညွှန်းတဲ့အခါ the ကို သုံးရပါတယ်။
မိမိပြောချင်တာကို အထူးပြုချင်လျှင် the ကို သုံးရပါတယ်။
I have no idea about the geography of England. (အင်္ဂလန်ရဲ့ ပထဝီအကြောင်းကို အထူးပြုပြောချင်တာ)
အတုမရှိ၊ တစ်ခုတည်း ရှိတာကို ပြောချင်လျှင်လည်း the ကို သုံးပါတယ်။
The sky was blue. (ကောင်းကင်)
The sun sets in the west. (နေမင်း)
The air was warm. (လေ)
The နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့အသုံးတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ တစ်ချို့ကို ဖေါ်ပြရရင် the ကို …
လူ၊ အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားကို ဖေါ်ပြရာမှာ သုံးပါတယ်။ My favourite flower is the rose.
နိုင်ငံသားကို ဖေါ်ပြရင်သုံးပါတယ်။ the Italian, the French, the British
ဂီတ ပစ္စည်းတွေကို ခေါ်တဲ့အခါမှာ သုံးတယ်။ You play the guiter.
အလုပ်အကိုင်တွေကို ဖေါ်ပြတဲ့အခါ noun group တွေရဲ့အရှေ့မှာ the သုံးတယ်။ the Russian poet/ the singer Zaw Win Htut (ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အလုပ်အကိုင် ၂ ခုကို တွဲပြီးဖေါ်ပြရင် the ကို တစ်ခေါက်ဘဲ သုံးရတယ်။ He is the singer and designer.)
Superlative ခေါ် နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြတဲ့ adjectives တွေရဲ့ အရှေ့မှာ သုံးပါတယ်။ the most beautiful/ the best/ the strongest စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။
Either…or/ neither …nor
Either…or နှင့် neither…nor တို့ကို ရွေးချယ်စရာ တစ်ခုခုကို ဖေါ်ပြရတဲ့အခါ သုံးတယ်လို့ အလွယ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ပိုပြီးရှင်းအောင် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးကို ပြောပြပါမယ်။ either..or ကိုတော့ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုအနက် တစ်ခုကို ရွေးချယ် ပြောဆိုတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။ အဲ့ဒီလို သုံးတဲ့အခါ ပထမရွေးချယ်စရာရဲ့ အရှေ့မှာ either ကို ထည့်ရပြီး ဒုတိယရွေးချယ်စရာရဲ့ အရှေ့မှာ or ကို ထည့်ရပါတယ်။
I am going either today or tomorrow. (ဒီကနေ့ သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်သွားမယ်။)
In exam, you either pass or fail. (အောင်ရင်အောင် မအောင်ရင် ကျမယ်။)
စကားပြောမှာတော့ either ကို ပထမရွေးချယ်စရာ အရှေ့မှာ အမြဲထားလေ့ မရှိဘဲ စာကြောင်းအရှေ့ပိုင်းမှာ ပါတဲ့ verb ရဲ့ အရှေ့မှာ ထားပြီး ပြောကြပါတယ်။
I’ll ring you either today or tomorrow. လို့ ပြောမယ့်အစား
I’ll either ring you today or tomorrow. လို့ တစ်ခါတစ်ရံ ပြောပါတယ်။
I suppose you either find funny or boring.
He would either have beenasoldier or an engineer.
Neither… nor ကိုတော့ စာအရေးအသားတွေမှာ၊ မိန့်ခွန်းလိုမျိုး ပြောစကားတွေမှာသာ အမျိုးအစားတူ၊ အကြောင်းတူ၊ အရည်အသွေးတူ၊ လုပ်ရပ်တူ စတာတွေကို negative အငြင်းပုံစံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုရင် သုံးပါတယ်။ Neither ကို ပထမနှိုင်းယှဉ်မည့် စကားလုံးအရှေ့မှာ ထည့်ပြီး nor ကို ဒုတိယ နှိုင်းယှဉ်မည့် စကားလုံးအရှေ့မှာ သုံးပါတယ်။
The teacher did not come and the students did not come.
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး မလာကြဖူးဆိုတာကို neither… nor နှင့် ဒီလို ရေးကြတယ်။
Neither the teacher nor the students came.
(မှတ်ချက် ။ Neither က negative ဖြစ်တာမို့ did not come စကားတွဲက did not ကို ဖြုတ်ပြီး come အစား came ပြောင်းရေးရတယ်။)
Neither he nor Maung Maung owe me any money. (ကျွန်တော့်အပေါ် ဘယ်သူမှ အကြွေး မတင်ပါ။)
He neither drinks nor smokes. (ဆေးလိပ်ရော၊ အရက်ပါ မသောက်တတ်ဘူး။)
စကားပြောမှာတော့ neither…nor ကို သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ ဥပမာ - Neither the teacher nor the students came. လို့ ပြောမယ့်အစား The teacher did not come and neither did the students. လို့ ပြောကြပါတယ်။
Maung Soe did not talk about his family and neither did Ko Kyaw.
I won’t give tip money and neither will my wife.
မေးခွန်းများကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာအမေးအဖြေကဏ္ဍ မှာ ဆက်လက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဖြေရန် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် မေးခွန်းများကို တိတိကျကျမေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Permalink Reply by Aung Win Naing on August 27, 2015 at 18:21
English grammar စာ အုပ်များတွင် theကို definite articleအဖြစ်သာဖေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ the ကို indefinite article အဖြစ်သုံးသည့် exampleတစ်ခုခုရှိလျင်ဖေါ်ပြပေးစေလိုပါသည်။ Thanks.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on August 31, 2015 at 10:35
Thank you for pointing that out Ko Aung Win Naing. It wasatypo. Actually it should read "နောက်ထပ် article တစ်ခုကတော့ the ဖြစ်ပါတယ်။".
Permalink Reply by Maymi Kolin on August 28, 2015 at 22:48
What is 'zero' article?
Permalink Reply by yae mon on August 30, 2015 at 13:16
Permalink Reply by Yi Yi Win on September 2, 2015 at 21:58
ရေ​ရေလည်​လည်​ ရှင်းပြထားလို့ ​ကျေးဇူး
Permalink Reply by Kundala on September 2, 2015 at 23:06
Very good www.myarmar-network.net
Permalink Reply by Daw PeTi on September 3, 2015 at 14:18
Permalink Reply by Mg Maung Myint on September 3, 2015 at 15:55
Permalink Reply by Ko Chin on September 4, 2015 at 10:03
Permalink Reply by Myat thu khant on September 4, 2015 at 10:23
Permalink Reply by Yi Yi Win on September 6, 2015 at 21:02
သေ​သေချာချာ ရှင်းပြ​ပေးထားလို့ အရမ်းကိုကြိုက်​ပါတယ်​ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်
Permalink Reply by aungzawoo on September 7, 2015 at 23:13